Baby motokari chigaro Gr0 + 1 + 2 + 3 (0-36kg)
Boka dzakafanana vanhu ainyatsoziva ne kugadzira uye ouinjiniya mwana motokari chigaro anenge akauya dzatumira pamwe chete chiono kuchengeta vana akachengeteka motokari rwendo.
Pose pfungwa itsva vakabuda, pamberi kuzviziva, tichaita yakawanda kuferefeta tsvakurudzo, uye experimental pokuputsa nemiedzo kuratidza pfungwa iri njodzi chete. Ipapo chikwata kuchaita nekutaura magadzirirwo mhinduro kuziva pfungwa kupinda chigadzirwa pasi chemhando makachengeteka mitemo.
Kana chigadzirwa akatendeka nekusimba ngozi, kurimwa uye romugove cheni zviri zvinokosha kuti yakachengeteka chigaro. In Wegro, isu kuva inoomesera nokutengesa & unhu zvakanaka nechokwadi mumwe chigaro takabudisa kunosvika kwokutanga kugadzira zvinodiwa.
Wegro chaitwa kuti akavimbika, mutoro uye vanoremekedzwa mwana kuchengeteka motokari zvigaro nokutengesa!
People - We vanoti "chikwata nhengo" kwete "vashandi". Tinokoshesa uye kutsigira nhengo dzedu chikwata ave makwikwi zvinobatsira. Tinoedza akwezve, kutanga, vanorichengeta uye kurudzira zvikuru unyanzvi vanhu tinogona kuwana, vanhu vane hanya uye vanoshanda pamwe chete neshamwari.